S-Ergo-115 Ultra Yakareruka Wiricheya - Karman Healthcare Ergonomic
Iyo S-ERGO-115 Ultra Lightweight Wiricheya inoratidzira yedu S-Rakaumbwa Seating System
Ndiyo nhamba yedu yekutanga yekutengesa zvakanyanya nekuda kwezvikonzero zvakawanda. Kwete chete iyo yekupedzisira wheelchair kuyera mukati pa 25 lbs, iri zvakare yakanakisa mu ergonomics. Tarisa uone mepu yekumanikidza uye kugoverwa kwehuremu kunowanikwa pane yedu yepasirese patent S-Yakaumbwa Seating system. Iyo inouya neinotsvaga tsoka yemutsoka uye zvimwe zvakawanda zvinhu zvakaita semabhureki anobviswa anorapwa ne AEIGIS® kubata anti-microbial yakavharwa zvigaro sisitimu.
Dzvanya pane zvinongedzo kuti udzidze zvimwe kana kuona vhidhiyo kuti zviri nyore sei kupeta wiricheya iyi, kuitakura, uye kunakidzwa nazvo kwemakore anotevera. Isu zvakare tine yekufambisa vhezheni S-115TP. Uyezve, dzidza nezve ese S-100 akateedzana ayo ane zvimwe zvinhu uye mashandiro anowanikwa anoenderana nezvinodiwa zvako chaizvo. Usakanganwa kufunga nezve kusarudza yedu Kurumidza Regedza mavhiri.
Unoda kuti iendeswe nekukurumidza uye yakananga kubva kudura redu? Hapana dambudziko. Iwe unogona kusarudza kugadzirisa uye kusarudza kunze kwakawanda sarudzo kubva pazasi donhwe menyu. Iwe unogona zvakare kuidana iyo mukati kana iwe uchida kuwana yako odha pane que. Isu tinokwanisa kukurumidza kutumira kubva kudura redu zuva rimwe chetero kune ese maodha akaiswa pamberi pa3 pm Pacific Standard Nguva. Izvo zvakakosha kuti isu tipe vatengi vedu ruzivo rwakanakisa runogoneka uye ruzivo rwekutenga. Kuendesa yako wheelchair yakakwana iwe kana mudiwa iri pamusoro chaipo pane yedu yekutanga runyorwa. Unoda nezvichena here? Buda S-ERGO RAKachena.
The S-ERGO-115 Ultra Yakareruka Wiricheya dhizaini inoshamisa.
Iko mutengo asi wakakodzera zviripo, uye kwete kuti usarasikirwe!. Yakakurudzirwa kune vanhu vane kwenguva refu yekufamba nyaya mupfungwa. Kana iwe uine pfupi-yenguva kudikanwa yewiricheya, imwe imwe modhi ingangove iri nani pane zvese "kukwana" kunyangwe iyi yemunhu mhando. Iwe une nyaya yekufamba kwenguva yakareba? Kana ukadaro, zvino zvinoshandura zvauri kutsvaga muwiricheya. Mushure mezvose, kana zvaunoda zviri zvenguva pfupi, kazhinji chero chigaro chakadzikama chinoshanda. Nekudaro, kana iwe uchiziva kuti iwe uchazoda rubatsiro rwekufamba kwemwedzi nemakore anouya, ipapo unotanga kuwana zvakanyanya kunyanya uye uchibvunza mibvunzo yakaoma nezve izvo zvaunoda muwiricheya.
Isu tinonzwisisa, ndosaka kana zvataurwa pamusoro zvichikutsanangura, isu tinofunga kuti uchada kuongorora kwedu kwakadzama kweS-115 Ergonomic Wiricheya.
Kune akawanda mawiricheya pamusika. Iyo ingangoita inopfuura nhamba inorema yesarudzo inogona kutungamira mukuongorora kupora mitezo. Kuti ikubatsire kucheka nepakati, tiri pano kuzobatsira kuti iwe ugone kuita ruzivo rwekutenga sarudzo.
Nechiyero chipi zvacho, iyo S-Ergo-115 ndeye yakasarudzika modhi. Muchokwadi, yakahwina rukudzo rwepamusoro pane yedu yekutenderera ongororo yeakanakisa mawiricheya ari kutengeswa nhasi. Muzvikamu zvinotevera, isu tinokufambisa iwe kuburikidza nezvose zvinogona kuitwa neichi chigaro chakanakisa, uye nekukuzivisa iwe nezve ayo (mashoma kwazvo) mashoma saka unogona kuzvisarudzira wega kana iri iyo "chaiyo" modhi yako.
hapana Tsvuku sirivha
hapana Yakagadziriswa - Yakajairwa Kurumidza Kuburitsa Mavhiri (+ $ 60.00)
hapana 24 ″ x1, Flat Mahara Polyurethane Mavhiri w / Ergonomic Handrim (Yakajairwa) 24 ″ x1 ″ MAG 8 Akataura Mavhiri (Chete neakagadziriswa maekisesa) (+ $ 122.00)
S-ERGO 115 - 25 lbs huwandu
SKU: S-ERGO115 Categories: Ergonomic Wiricheya, Karma Mawiricheya, Wiricheya isingaremi, Ultra Lightweight Wiricheya Tags: 115, ergo, zvakadaro 115, wheelchair isina mwero, s-ergo, s-ergo 115, sergo, wiricheya, mavhiripu
Inorema chete 25 lbs (isina footrestrest) ultralight wiricheya
Chigaro Upamhi: 16 ″ x 17 ″, 18 ″ x 17 ″, 20 ″ x 17 ″
Pakazara Hupamhi Hupamhi 23 padiki., 25 padiki., 27 padiki.
Kune Yakazara Sarudzo Rondedzero / HCPCS KODZESE Ndokumbira utore ORDER FOMU Nekuda kwekuzvipira kwedu mukuvandudza kunogara kuripo, Karman Healthcare inochengetera kodzero yekuchinja maratidziro uye dhizaini pasina chiziviso. Kupfuurirazve, kwete ese maficha uye sarudzo dzakapihwa dzinoenderana neese magadzirirwo eiyo wiricheya.
S-ERGO-115 - Ultra Wiricheya isingaremi UPC #
*Kana uchibhadharisa, ndapota tarisa nemazuvano madhaidhi ePADAC pane yedu yekupedzisira wiricheya. Ruzivo urwu haruna kuitirwa kuti rwuve, uyezve harufanire kutorwa sekubhadhara kana kuraira kwepamutemo. Vapiro vane basa rekuona makodhi akakodzera ekubhadharisa kana vachiendesa zvirevo kuchirongwa cheMedare uye vanofanirwa kubvunza gweta kana vamwe vanachipangamazano kuti vataure nezve mamwe mamiriro ezvinhu mune rumwe ruzivo.